मशालको महाधिवेशन र नेता मोहन बिक्रम : एक बिश्लेषण
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को नेता हुन मोहन बिक्रम सिंह । उनलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टिको पुराना गुरु, र स्कुलिङ कर्ताको रुपमा पनि मानिदै आएको छ । उनी ९ बर्षजति पञ्तायती जेलमा बसेर बाहिर निस्केपछि नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका सिद्धान्तनिष्ठ शिर्षस्थ नेता तथा संस्थापक महासचिव कमरेड पुष्पलाल बिरुद्ध ‘गद्धार पुष्पलाल’ भन्ने ९९ पानाको किताब लेखे । पञ्चायती ब्यवस्था बिरुद्ध सारा बिरोधी शक्तिलाई एक जुट पारेर लड्ने रणनीतिक तयारीमा लागेका र संयुक्त जन आन्दोलनको प्रतिपादन गरिरहेका कमरेड पुष्पलाल बिरुद्ध उनले जेलबाट निस्केपछि यस्तो किताब किन लेख त्यो अहिले पनि ठूलो सन्देहको बिषय छ । यद्यपि त्यस किताबको नाम बदलेर अहिले ‘क्रान्ति कि भ्रान्ति’ भनेर राखिएको छ । त्यो शिर्षकले नै पुष्पलाल क्रान्ति गर्न होइन, भ्रान्ति फैलाउन खोजेको भन्ने कुरा दर्शाउदँछ । यद्यपि सिंहले जति लेखन गरे पनि जति स्कुलिङ गरे पनि उनमा संगठन निर्माण र बिद्रोह गर्ने क्षमतामा कमजोरी भएको बताईन्छ । बास्तबमा उनको जति क्षमता छ त्यस अनुसार जन्माएका नेतालाई संगठित र परिचालन गरी आन्दोलनका सारथि हुन नसकेको देखिन्न। यद्यपि मसाल र पार्टीको मोर्चा राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नो छुट्टै बिचारधारा बोकेर आईरहेकोले पनि नेता जन्मने र नया दलमा समाहित हुने गरेको बुझाई छ। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना पछि पनि संघियताको बिरोध गरी बिकेन्द्रिकृत प्रणाली हुनु पर्ने तर्क र यसमा आएको बिकृति माथि मोर्चाको नेतृत्व लिएका चित्रबहादुर केसी चर्चित बनेका छन्।
आठौ महाधिवेशन :
नेकपा मसालको आठौं महाधिवेशन काठमाण्डौमा एक हप्तामा समणपन्न भएको छ । देशभरबाट करिब पाँचसय जना प्रतिनिधि र पर्यबेक्षक रहेको भनिएको अधिबेशनबाट पाँचौ पटक पनि मोहन बिक्रम सिंह नै महामन्त्रीको कार्यकाल लिन सफल भएका छन् । महाधिबेसन हुनु पहिलेदेखि नै नेतृत्व र बिचारको समेत बिबाद बाहिर आएको थियो। यसबाट जन गायक जीवन शर्मा लगायतको नेता,कार्यकर्तालाई संस्थापन पक्ष्यले कारबाही गरेको खवरहरु समेत संचार माध्यामहरुमा बाहिर आएका थिए । यद्यपि, यो अर्ध–भुमिगत भनिने गरेको पार्टीमा को कति बिबादित बन्यो पूर्णरुपमा जन समक्ष आउने गर्दैन। बिबादित बिचार र नेतृत्वको बारेमा बहस भने भईरहेको बुझिन्थ्यो । जे भए पनि जतिबेला महाधिबेसन आउछ, असन्तुष्टि उत्पन्न भएर बिबादित बन्ने परम्परा भने रहेको छ।
केन्द्रिय समिति चयनः
महाधिबेशनले २७ पूर्ण, ९ बैकल्पिक,९ सल्लाहकार गरी ४६ जना केन्द्रीय समिति चयन गरेको छ । केन्द्रिय सदस्यहरुमा बागलुङका बरिष्ठ नेता चित्र बहादुर के.सी. कृष्ण पौडेल, अमर थापा, कृष्ण थापा, कृष्ण अधिकारी, नवलपरासीका कृष्ण पौडेल, दाङका रश्मीराज नेपाली, प्यूठानकी दुर्गा पौडेल, राम बहादुर बुढा, बोम बहादुर खत्रि, कृष्ण खड्का, भक्तपुरकी मिना पुन, काठमाण्डौको आनन्द शर्मा, र नवलपुरका गङ्गा पौडेल, दुर्गा के.सी., काशीनाथ पोखरेल र सुरेश थापा, पर्वतका हिमलाल पुरी, चितवनका भैरव रेग्मी दैलेखका जनक शर्मा डोटीका मनोज भट्ट र आर.सी. भट्ट कास्कीका शंकर बराल र चन्द्र बहादुर के.सी. चयन भएका छन् ।
बैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरुमा हरिकृष्ण पाण्डे, शिव पौडेल, ध्रुबवीर पुन। वासु पोखरेल, कृष्णराज पाण्डे, हरिकान्त शर्मा, निम बहादुर बुढा, तुलसी सापकोटा, रत्न विक्रम प्यासी, चयन भएका छन। सल्लाहकारहरुमा चेतनाथ आचर्य र बद्रे आलम हरि आचर्य, ठाकुर खनाल, राजेश विक , राजाराम चौधरी, छबिलाल सुर्तुङी, र तारा थापा मधु क्षेत्री भएका हुन् ।
मोहन बिक्रम संक्षीप्त जीवनीः
वि.स १९९२ बैशाख ३ गते मरुटोल, काठमाडौमा जन्मिएका सिंहको स्थायी ठेगाना प्युठानको ओखरकोट हो । अर्थशास्त्रमा एम.ए. अध्ययन गरेका सिंह २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी प्यूठान र सल्यानको मोर्चाहरुमा काम गरेका थिए। २००८ सालमा जुद्धोदय पब्लिक हाईस्कूलको प्रथम अध्यक्षमा निर्वाचित उनी २००९ सालमा भारतीय हस्तक्षेप विरोधी विद्यार्थी आन्दोलनमा एक महिना काठमाडौं भद्रगोल जेलमा थुनामा परेका थिए । २०१० सालमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेका सिंह एक बर्षमै प्यूठानको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनमा गिरफ्तारी भई २० महिनासम्म जेल जीवन बिताएका थिए । २०१४ सालमा दोश्रो महाधिवेशनमा केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित २०१८ सालमा पञ्चायतको बेला सुरक्षा कानूनमा ९ वर्ष जेल जीवन बिताएका थिए । २०२९ सालदेखि भूमिगत जीवन बिताएका उनि २०३१ सालमा ने.क.पा. (मसाल) को चौथो महाधिवेशनमा महामन्त्रीमा निर्वा्िचत भए। २०४१ सालमा रिमको स्थापना सम्मेलनमा सहभागी भएका उनी २०४६ सालदेखि अर्ध–भूमिगत रहँदै आएका छन्।
अल्पमत पक्ष असन्तुष्टः
महाधिबेशन अनुशासन बिहीन र अभद्र तरीकाबाट सप्पन्न भएको असन्तुष्ट पक्षले बताएको छ । श्रोतका अनुसार महाधिवेशनमा बहुमत पक्षले एकलौटी ढङ्गबाट समिति गठन गरेको जनाएको छ। यूवा र उर्जावान तथा योगदान गरेका नेतालाई समितिमा नराखिएको भन्दै अल्पमत पक्षले असन्तुष्टी जनाएको छ । नेकपा मसालमा लामो समय विगत केन्द्रिय समितिमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका नेताहरु विमल शर्मा, गोविन्द सिंह थापा, ओम बहादुर के सि, रुद्र पौडेल, सन्त बहादुर नेपाली, शशिधर भण्डारी, नर बहादुर पुन, नारायण योगी, राजेन्द्र ढुङ्गाना लगायत नेतालाई हटाइएकोमा असन्तुष्टी जनाएकोे श्रोतले बताएको छ । संस्थापन पक्षले महाधिबेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको बताइएको छ।
सिंहका उतारचढाव :
चौथो महाधिवेशनमा पहिलो पटक महामन्त्री भएका सिंहलाई पाँचौ महाधिवेशनले कारवाही गरेको थियो । मोहन विक्रम कारवाही परेपछी चित्र बहादुर केसी, गोविन्द सिंह थापा र भैरव रेग्मीलाई हात लिएर पार्टी फुटाएका सिंह छैठौं महाधिवेशनबाट दोश्रो पटक महामन्त्री भएका थिए ।छैठौं महाधिवेशन पछि दुर्गा पौडेललाई बिवाह गरेको मुद्दामा छोरा समिर सिंहले पार्टीमा मुद्दा दर्ता गरेपछि सिंहको बिवाह सम्बन्धमा आयोजना गरेको भेलाले सिंहलाई कारवाही गर्दै रामसिंह श्रीसलाई महामन्त्री बनाएको थियो ।२०५८ सालमा तत्कालीन एकता केन्द्रसंग मसालले पार्टी एकता गरेपछी सिंह तेश्रो पटक महामन्त्रीमा चुनिएका थिए ।
२०६३ मा एकताकेन्द्र र पूर्व मसालका केही नेताहरुबाट पार्टीलाई अलग गरेर नेकपा मसालको पुनः स्थापनाको लागि सातौं महाधिवेशन गरी सिंह चौथो पटक महामन्त्री बनेका थिए भने १२ वर्षपछि काठमाडौमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट ८६ वर्षीय सिंह नै पुन महामन्त्रीमा चुनिएका हुन् ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा मोहन बिक्रम सिंह कम्युनिष्ट जन्माउने नेता आन्दोलनको सारथि बन्न सकेनन। मोहन बिक्रम पुरानो नेता भएपनी महाधिबेसनमा बिचार र नेतृत्व लाई लिएर बिबाद हुने गरेको जानिफकारहरु बताउछन।
लेखक थापा सामाजिक अभियन्ता हुन।